IKhadi leTarot yeNqwelo - Khetha Uphawu
IKhadi leTarot yeNqwelo
Intsingiselo yeKhadi leTarot, uthando, ukubuyiselwa umva & Okuninzi x Ikhadi leTarot: Inqwelo yokulwa
Iplanethi: Ilanga, iUranus
Amagama angundoqo: Injongo, eMiselweyo, iNtshukumo, iNyathelo, Amandla
Intsingiselo: Ngokubanzi - Uthando - Umsebenzi - Impilo
Umgca wexesha: Ixesha elidlulileyo - Nikela - Ikamva
Okunye: Ibuyiselwe umva
Ukulawulwa ngenombolo yesixhenxe (i-Uranus), iNqwelo yeNqwelo yikhadi lokudibanisa okucocekileyo kwezinto ezichaseneyo, amadoda kunye nesetyhini, iLanga kunye neNyanga, ubaba wethu nomama wethu kunye nokubonakaliswa kwayo uLeo no-Aquarius. Idityaniswe ngokubanzi kwintsomi kaHelios okhwele inqwelo yakhe yomlilo esibhakabhakeni de wawa ekulawuleni kwakhe okunyukayo kunye nesantya esikhulu. Ukongeza, inika unxibelelwano kunye nomqondiso woMhlaza, owasetyhini kunye nomama, kunye neGrail eNgcwele efunyenwe kwinqanaba lokuphakanyiswa kweJupiter apho lonke ulwazi lufumaneka khona. Olu luphawu oluntsokothileyo lokutolika, ubukhulu becala lubonisa isikhokelo kulwazi oluphezulu kunye neenkalo esingazaziyo, kwaye zibonisa ukuba izinto esinqwenela ukufunda ngazo zingundoqo ekukhuleni kwethu ngokomoya. Nangona iqhutywa yindoda, iNqwelo ngokwayo ayisiyondoda okanye ibhinqa kodwa i-asexual, ibhekisela ekudibaneni okucocekileyo kwemiphefumlo engenanto yakwenza nokuchukumisa ngokomzimba kunye nethuku, kunye nokunye okuninzi okuphathelene nenjongo ephakamileyo, iindlela ekwabelwana ngazo, iinjongo kunye nokuziphatha. Izalathiso ezenzelwe ukwandisa i-horizons kunye nemibono yethu. Undoqo wobizo lokholo, le ayisiyondawo ilula ukufikelela kuyo, kodwa isenza sinxibelelane nolwazi lobomi ngokwabo kunye nondoqo wonxibelelwano esilwenzayo ngesenzo esisulungekileyo sokudala apho kungekho gxala, kuphela intshukumo yendalo yomntu kunye ukuhamba kokwazi.
Ukunyuka ukuya kumongo wendlela yeemvakalelo yomntu ngamnye, ikhadi leNqwelo ayilophawu lokunxibelelana nomnye umntu ngendlela esifuna ngayo ukubonakaliswa. Ithetha ngeebhondi zethenda kodwa zeplatonic, zemishini ekwabelwana ngayo kunye nezifundo ekufuneka sizifundile kubafowunelwa esinqwenela ukucacisa. Ukuba ubudlelwane sele buqalisile kwaye buneengcambu kwihlabathi elibonakalayo, liyikhadi elimangalisayo lokubonisa, kuba libonisa ukuba injongo yebhondi ayiyi kulahleka ngokukhawuleza kwaye iinkolelo kunye nokukhuthaza ebomini kwabelwana ukufikelela kumanqaku afanayo. yokuqonda nokuqonda. Kwelinye icala, kufuna ixesha lodwa kunye negumbi elaneleyo lemida ecacileyo neqinileyo ukusigcina sikhuselekile kulo naluphi na unxibelelwano olungenampilo okanye olunetyhefu olusisusa kwindlela yethu yobuqu yokukhanya.
Izisombululo ezitsha ezantsi kwendlela, iinzame ezinkulu ezidibeneyo kunye nokusebenzisana okwenziwe ngenjongo ngesikhokelo esifanelekileyo, iChariot ngumhlobo obalaseleyo kunye nogxa onokuthi ubekhona emva koko aphele, abuye kwakhona ngexesha lobunzima. Impembelelo entle xa imiba eyingozi kufuneka ihoywe, nakwimimandla yobuchwephesha efuna umngcipheko ngokubanzi, ixhasa abaqhubi beenqwelomoya, abo bakulawulo lwenqwelomoya, imarike yemasheya, abavumisi ngeenkwenkwezi, iishaman, naye wonke umntu osendleleni yokunceda abanye ngeyakhe. ukukhula komntu. Sekunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuba ifuna ukuzibophelela ngokupheleleyo kwinjongo enkulu, kwaye senze ngokuhambelana neetalente zethu zokwenene kunye namandla, sikhuphe ukuzithemba kwindawo ethile endleleni njengolusu olungasikhuseli.
Kuxhomekeke kukulungela kwethu uxanduva oluthile esiluthwele emagxeni ethu, kwimeko yezempilo eli khadi linokubonisa ukuba siyazityhala ngaphezu kwemida yethu yomzimba. Icela inkqubo enempilo kwaye imizimba yethu yomelele ukuze iimbono zethu kunye nengqondo yethu ibe nokukhululeka ekubonakaliseni into eza nayo. Ngokwesiqhelo, iyakubonisa amandla ethu kunye nokomelela kwethu, kodwa inokukhomba ubushushu obuphezulu kunye nokuhla komzimba okuphuma ekuswelekeni kokulungelelana kunye necala elibuthathaka kwiphysiology yethu efuna ukuphumla kunye nokongiwa. Kwimeko engalunganga inokukhomba kwiintloko, iingxaki ze-neural kunye neemeko ezingapheliyo ezisithintelayo xa sinqwenela ukuhamba kakhulu, zisikhumbuza isantya esifanele sibambelele kuso ngenxa yokuba sinqunyelwe ukuqonda kwethu ukubaluleka kokwethu. ubukho bomzimba. Ukophula imiqobo yomzimba, kufuneka simamele eyethu i-physiology, siyenze iqabane lethu.
Inqwelo yokulwa Yabuya Umva
Xa iNqwelo iguqulwa, ukudibanisa kwayo nokuwa kweHelios kwilangatye elikhulu kuyingozi ukucinga ngayo. Ngaphandle kokubonisa ukuba i-ego yongamela intliziyo kwaye ibhalansi iye yaphazamiseka ngokunzulu ngenxa yokhetho lwethu olubonakala lunengqiqo, lubonisa ukuba siye sawufulathela uvakalelo lwethu okanye siwulahle ukuze sifikelele kwizikhundla zamandla, isikhundla, okanye impumelelo. Esi sikhundla asiyi kuvumela amampunge okanye amanzi angekho nzulu, isoyikise indalo yethu ukuba ivuthe amadangatye kuba sizama ukulingana nabanye abantu abakulindeleyo, izithethe zasekuhlaleni, okanye ukuba ngabantu abakhulileyo xa sifuna ukunyaniseka ngentliziyo yethu. Ifuna ukuphumla, ukucamngca kunye nokunxibelelana neyona mvakalelo inzulu yeemvakalelo phambi kokuba wenze naziphi na iintshukumo ezintsha.
Umgca wexesha leNqwelo
Ixesha elidlulileyo - Ikhadi loloyiso, iNqwelo ithetha ngesikhundla esisinikwe ngokuthembakala kwaye sifikelelwe ngokusebenza nzima kwixesha elidlulileyo. Yinqaku lokongamela kwethu, amandla obuqu kunye nokunqongophala kokungazithembi, kwaye ibonisa ukuba ezinye zezigqibo zethu zenziwe ngamandla amsulwa kunye nokunyuka kokuqonda xa sasizenzekela kwaye sihamba nobomi. Bubungqina bokuba senze kakuhle kwaye bubonisa ukuba izinto esinokuzibuza ngazo namhlanje bekungafuneki zibuze kwasekuqaleni, zisalatha ukuba sijonge kwikamva ukuze sifumane izisombululo endaweni yokufuna ityala, ihlazo kunye neempazamo esakhe sazenza. Ngumhlobo olungileyo osikhululayo kwiimbono ezingalunganga kwi-Self, kwaye ubonisa ukubaluleka komntwana wangaphakathi osizise apho sikhoyo namhlanje ekukhanyeni okuvuthayo, okusebenzayo, okunempilo okuzenzekelayo.
Nikela - Ukubonisa amandla okuthanda kunye nokukwazi kwethu ukunyuka kwimiqobo yethu, iNqwelo yeNqwelo isithwala ngendlela efanelekileyo ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokungabaza. Ithetha ngemeko yengqondo ecacileyo nengathintelekiyo, ngezikhundla esinokuzifumana, kunye nolwazi esiluqokelelayo ngoku nokuba asiyazi ngokupheleleyo yonke inyathelo lendlela. Ingakhomba kwiingxaki ezisibuyisela umva, kunye nokubonisa ubuthathaka bemeko yethu ukuba asinawo amandla aqinileyo kunye nenyathelo lokunyuka phezulu ngesizathu esifanelekileyo. Ekuphela kwento esinokuzibuza yona kule ndlela kukuba senza le nto siyiyo ngeyona njongo inkulu sikholelwa kuyo ngokunzulu.
Ikamva - Ukunyuka okunempilo kweSiqu, ukuzithemba kunye nokomelela, amandla okudala engqondo, kunye nemithwalo yentshukumo efunekayo ukwenza impumelelo enkulu kwindlela yethu eya ekuzalisekeni, iNqwelo yeNqwelo ibekwe kakuhle ekufundeleni ikamva lethu. Ngandlel’ ithile, isinika inkululeko yeentshukumo ezingxamisekileyo, ezinjengomntwana, kwaye nangona isenokuba luphawu olusisilumkiso kumanyathelo ethu anyuliweyo, iyasiqinisekisa ukuba kungakhathaliseki ukuba zininzi kangakanani na iimpazamo ezingxamisekileyo esizenzayo, siya kuba sisendleleni elungileyo esinge kwiNgcwele. Uluhlu lolwazi. Ukusinika amaphiko ukonwabela ubomi nokuba yintoni na enokuzisa, kusikhulula kumthwalo wemiqathango yemihla ngemihla kwaye kusivulela iingcango zohambo olutsha.
Kwimizobo yayo yokuqala, eli khadi limelwe ngamahashe kunye ne-sphynxes ngokungafaniyo nomnye, ukutsala umntu onegunya ozolile kwaye olawulayo. Ukunyakaza okuninzi kuye kongezwa ngokuhamba kwexesha, kwaye nezilwanyana ezikhokela umntu okhokelayo ziye zaqala ukugijima kwaye zihlawulela phambili, nangona zisekho kwixesha elidlulileyo. Kwi-Thoth Tarot, inkokeli ilawula izilwanyana ezine, zonke zibonisa ukubaluleka kweSaturn, isakhiwo, kunye nokuzithiba okufunekayo ukufikelela kwinqanaba lokuzinza ukuphumeza i-Uranus njengokukhanya kwengcamango kunye nokuqonda kwethu okuphezulu. Kwagxininiswa ekuhambeni kwexesha ukuba ingamandla okukhusela kunokuba ube nobudlova, kwaye ekubonweni kokugqibela, uthetha ngokuchasana okuphambili kwentshukumo kunye nokuphumla okufuneka kube ngokulinganisela ukukhula komntu.
Sagittarius Leo Capricorn Khetha Uphawu Aries